သင်္ကြန်​တွင်းမှာ ​​​​အ​ဖော်​ ​ဆောင်​ပါ .. - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သင်္ကြန်​တွင်းမှာ ​​​​အ​ဖော်​ ​ဆောင်​ပါ ..
သင်္ကြန်​အကြတ်​​နေ့ .. duty လည်း နား​တုန်း ​လျှောက်​လည်​​နေရင်း ​တွေ့လိုက်​တာ.. state ​ကျောင်းက သူငယ်​ချင်း ဖိုး​ထောင်​(နာမည်​​ပြောင်​ပါ..ဟိုစပ်​ဒီစပ်​နဲ့ ​နေရာတကာ ​တွေ့​နေရလို့ .အရပ်​ကလည်း အရှည်​ကြီးမို့)..
မျက်​နှာက မကြည်​မသာနဲ့မို့ ​မေးကြည့်​​တော့ .. ဒီလို သူငယ်​ချင်း အကြို​နေ့​က ငါ နည်းနည်း ​သောက်​တာများသွားတယ်​.. လူကလည်း လွှတ်​​နေပြီး ​အ​ဖော်​လဲ​ကောင်း​တော့ … ​ပြောရရင်​ကွာ.. မ​ကောင်းတဲ့​နေရာ ​ရောက်​သွားပြီး.. အဲ့က ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ တူတူ​နေ ဆက်​ဆံမိတယ်​.. လူကလဲ မူးရူး​နေ​တော့ အကာအကွယ်​သုံးမိလား မသုံးမိလား မသိ​တော့ဘူး..
ခုကျ.. အဲ့​နေ့က ကြုံခဲ့တာ​တွေ ​တွေ့မိပီး.. ငါ ​ရောဂါကူးနိုင်​လား.. ဒုက္ခရာက်​​တော့မလား မသိဘူးကွာ… ခု လည်​ရတာလဲ မ​ပျော်​​တော့ဘူး..
ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ငါ့ကို ကူညီပါဦးကွာ..
ဒါဆို သူငယ်​ချင်း.. ခု ​လော​လောဆယ်​ ​နောက်​ဆို အကာအကွယ်​ကို ​သေချာသုံးဖို့ရယ်​.. မသုံးခဲ့မိရင်​ ဘာ​အကျိုးဆက်​​တွေ ဖြစ်​နိုင်​သလဲ .. ဘယ်​လို ကာကွယ်​ရမလဲ ဆိုတာ​တွေ ​ပြောပြချင်​တယ်​ကွာ.
အလွယ်​ကူဆုံးနဲ့ ​နေရာတိုင်းမှာ ရနိုင်​တာက​တော့ “condom” ​ပေါ့ …one size doesn’t fit all ဆိုသလို ကိုယ့်​အရွယ်​အစားနဲ့ လိုက်​တာကို သုံး​.. မဟုတ်​ရင်​ လူကလဲ မူး​နေတာမျိုး.. ​သေးလွန်းကြီးလွန်းတာမျိုးနဲ့ဆို ​ပေါက်​ပြဲတာမျိုး ​ကျွတ်​ထွက်​သွားတာမျိုးနဲ့.. အသုံးပြုပြီး အလကား ဖြစ်​နိုင်​တယ်​..
ပြီး​တော့ date ကုန်​​နေတဲ့ ၊ အလွယ်​တကူ ရထားတဲ့ condom​တွေ ၊ ​​ချောဆီနည်း​နေတဲ့ condom ​တွေဟာ ​ပေါက်​ပြဲလွယ်​တာမို့ အသုံးမပြုပါနဲ့…တစ်​ခါ ဆက်​ဆံပြီးတိုင်း အသစ်​တစ်​ခုကို သုံးပါ.. မ​မေ့ပါနဲ့..
တကယ်​လို့များ ​အသုံးပြုဖို့ မေ့သွားရင်​ ၊ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ လိင်​အင်္ဂါမှတဆင့်​ ရောဂါ ကူးစက်​မယ်​လို့ သံသယ ရှိ​နေရင်​..
နီးစပ်​ရာ ​ဆေးရုံ ​ဆေးခန်းမှာ ​ဆေးသွားစစ်​ပါ..
သို့​သော်​ HIVပိုးဟာ window period လို့ ​ခေါ်တဲ့ ပိုးဝင်​​သော်​ငြား ရှိ​ကြောင်းမပြတတ်​တဲ့ အချိန်​ကာလမှာ ​ရောက်​​နေရင်​ ​ဆေးစစ်​ချက်​ မှားတတ်​ပါတယ်​..
ဒါ​ကြောင့်​ ​နောက်​ဆုံး လိင်​ဆက်​ဆံခဲ့တဲ့​နေ့မှ နောက်​​​လေးပတ်​ကြာမှာ ရောဂါပိုးကို စစ်​သင့်​တယ်​..တချို့လူ​တွေမှာ သုံးလ​လောက်​ထိ ​ရောဂါပိုး ရှိ​ကြောင်းမပြတာမျိုး ဖြစ်​တတ်​လို့ မိမိကိုယ်​ကို သံသယ ရှိ​နေရင်​ အဲ့ချိန်​မှာ ထပ်​စစ်​နိုင်​ပါတယ်​…
အကာအကွယ်​မဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံခြင်းက​နေ HIV ပိုးအပြင်​ တခြား ကူးစက်​နိုင်​တဲ့ ​ရောဂါ​တွေ ရှိ​သေးတယ်​..
အသည်း​ယောင်​ အသားဝါ B ပိုး (hepatitis B )
ကာလသား ​ရောဂါပိုး (syphilis)
လိင်​အင်္ဂါ ကြွက်​နို့ (genital warts)
chlamydia လို​ ဘက်​တီးရီးယားက​နေ ကူးစက်​တဲ့​ရောဂါ​. အစရှိတာ​တွေ ဖြစ်​နိုင်​တယ်​..
တချို့​ရောဂါ​တွေဟာ အချိန်​ခဏနဲ့ လက္ခဏာပြတတ်​သလို တချို့ကလဲ အချိန်​ကြာတတ်​တယ်​
ဒါ​ကြောင့်​ သတိထားသင့်​တာ​တွေက မိမိမှာ ..
လိင်​အင်္ဂါက​နေ ​သွေးထွက်​ခြင်း၊အနံ့ဆိုးအကျိချွဲ ထွက်​ခြင်း
လိင်​အင်္ဂါတဝိုက်​ အဖုအပိမ့်​များ၊ အနာများ ထွက်​ခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်​ မ​​နေနိုင်​​အောင်​ ယားယံ၍ ကုတ်​ခြင်း ​တွေ ရှိလာရင်​ နီးစပ်​ရာ ​ဆေးခန်းကို အမြန်​ဆုံး သွားပြရမယ်​..
ဒါ့အပြင်​ မိမိချစ်​သူ ၊ ဇနီးတို့နဲ့ အတူ​နေ ဆက်​ဆံတဲ့အခါ .. မိမိ မှာ လိင်​မှတဆင့်​ ကူးစက်​တတ်​တဲ့ ​ရောဂါ ရှိ​နေတယ်​(သို့) ဆက်​ဆံ​ဖော်​မှာ ရှိ​နေတယ်​ဆိုရင်​ အကာအကွယ်​သုံးဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့ .
အကာအကွယ်​မသုံးပဲ သုတ်​ကို အပြင်​မှာ လွှတ်​တယ်​ဆို​ပေမယ့်​ မလိုလားအပ်​ပဲ ကိုယ်​ဝန်​ရတာမျိုး ဖြစ်​နိုင်​ပါ​သေးတယ်..
ဒီ​တော့ သူငယ်​ချင်း​ရေ.. အကာအကွယ်​မဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံခြင်းဆိုတာ မိမိ​ရော ဆက်​ဆံ​ဖော်​ အတွက်​ပါ အန္တရာယ်​များတာမို့ အကာအကွယ်​ သုံးဖို့မ​မေ့ပါနဲ့..
၂၀၁၈မဟာသင်္ကြန်​ကို အန္တရာယ်​ ကင်းရှင်းစွာ ဖြတ်​သန်းနိုင်​ပါ​စေလို့ ​တောင်းဆုပြုလျက်​…